Woyyaaneen Muktaar Kadiirii fi Asteer Maammoo ariite; Lammaa Magarsaa fi Warqinaa Gabayyoo mataa OPDO irra keette - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Woyyaaneen Muktaar Kadiirii fi Asteer Maammoo ariite; Lammaa Magarsaa fi Warqinaa Gabayyoo...
Woyyaaneen Muktaar Kadiirii fi Asteer Maammoo ariite; Lammaa Magarsaa fi Warqinaa Gabayyoo mataa OPDO irra keette
Jijjiirraan OPDO ykn TPLF keessatti taú kamuu mootummaa kana badii irraa hin dandamachiisuu jedhu hayyoonni siyaasaa.
Muktaar Kadiirii fi Asteer Maammoo woggoottan hedduuf Mootummaa Woyyaanee faanchataa erga tutanii booda saáa dhumaa irratti teessoo ittiin sobamaa turan irra darbataman. Lammaa Magarsaa, af-yaa’ii Caffee Oromiyaa kan ture, gara dura taa’ummaa OPDO’tti as dhufeera. Worqinaa Gabayyoo, ministera geejjibaa kan ture, itti aanaa isaa ta’uudhaan muudame. Worqinaa Gabayyoo Tigree Afaan Oromoo dubbatuu- jeedala gogaa hoolaa uffattee Oromoo keessa jiraattuudha.
Akkuma miseensota OPDO kanniin duraa jarreen lamaan kunis, erga itti nyaatamaa fi itti taphatamaa turee booda kabajaa tokkoon maletti guyyaa har’aa hundatti gatamana.
Erga Sadaasa 2015 fincilli ummataa Oromiyaa raasee kaasee namoonni kunniin akka ariáman irrra deddeebiée odeeffamaa turus dhugaa kan taé garuu amma. Woyyaaneen haala qilleensaa ilaalaa erga turtee booda dubbiinakka isii baasaa hin turre hubannaan ashkaroota kanniin garaa jabaatte, geggeessuudhaaf murteeffatte.
Haalli Itoophiyaa keessa jiru sadarkaa hamaa irra gayuu fi mootummaan Woyyaanee qarree irra jiraachuudha kan hayyoonni waaée Itoophiyaa duukaa buán dubbatan. Akka xiinxala isaanitti jijjiirraan OPDO ykn TPLF keessatti taú kamuu mootummaa kana badii irraa kan dandamachiisuu miti.
Ganna 25’n dabre keessatti miseensota OPDO guddaa-xiqqatte taphatame. Yeroon OPDO’n uftaatee jiraattu, salphachuu fi xiqqaachuun nu gaye jettu yoomi?
Previous articleUN Human Rights Council yakka mootummaan Itoophiyaa Oromiyaa fi naannoo Amaaratti raawwataa jiruuf xiyyeeffannaa akka laatu HRW gaafate
Next articleHaylamaaram Dassaalenyi tankaarfii Fayyisaa Leellisaa Rio’tti fudhateef itti gaafatamaan Oromoo USA jiraatuudha jedha